Izakhamuzi zakuleli zishayekile wukhuvethe ngezindlela eziningi - Bayede News
Isalokhu iqhubekile ingcindezi empilweni yezakhamuzi zaseNingizimu Afrika elethwe ukufika kobhubhane ukhuvethe.
Ngenyanga eyedlule kumiswe isibonelelo sokhuvethe sabangasebenzi sama-R350 okwenze isimo saba nzima kakhulu kubantu abahlwempu abebethembele kuso.
NgoLwesibili elaboHlanga livakashele erenki yamatekisi eMgungundlovu ngehora lesi-8 ekuseni lapho lilamele uNkk uMakhosi Mjwarha obeqoba inyama epheka nelayisi emabhodweni amakhulu abewabeke phezu kwesitofu segesi. Lona wesifazane uziphilisa ngokudayisa ipuleti lokudla erenki ngalinye ngama-R35. Imali ayithola ngokwenza lokhu ukhokha ngayo irenti yalapho ehlala khona nomndeni wakhe enye ayithumele ekhaya eMpendle ukuze izingane zakwabo zizokwazi ukuphila ziphinde zikhokhe nemali yesikole.
Uthe selokhu kwaqubuka ukhuvethe amanani okudla okumqoka okufana nempuphu, ilayisi, amafutha negesi ayisebenzisayo ukupheka akhuphuke kakhulu. “Ukukhuluma iqiniso, kunzima kakhulu kulezi zinsuku ngoba sengehlisa nesikali sokudla. Angisatholi nanenzuzo etheni. Ngizothola ama-R700 kodwa angizothola inzuzo engangivame ukuyithola. Phambili uma ngithenge ngama-R700 bengithola inzuzo cishe angama-R300 kuya kuma-R350 kepha manje sengithola i-R150 lokhu kungikhombisa ukuthi amanani okuphila anyukile,” kusho uNkk wakwaMjwarha.
Ucwaningo lwezobuchwephe olwenziwe i-Info Jam luthole ukuthi izindleko zokuphila kubantu bakuleli azisabekezeleleki. ISikhulu Esiphezulu sale nkampani uNkk uJujia Midri sithi iningi labantu abakhulume nabo ezweni lonke lithe selishintshe indlela elisebenzisa ngayo imali kuhlanganisa nokunqamula ukusebenzisa imali ezintweni ezingekho mqoka okufaka nedata kanye nokudla okuthengwa sekuphekiwe.
“Kubantu ababalelwa ema-97% izindleko zempilo sezenyukile, izinto ezimba eqolo kakhulu kamumva nje nalapho izakhamuzi ezizwela khona ukwenyuka kwentengo yokudla kanye nezokuthutha. Kunezinye zezinto ezimqoka okubalwa ugesi, i-intanethi abantu baphoqeleleke ukuba babe nezinto abazinqamulayo,” kusho uNkk uMidri.
Inhlangano yamalungelo abantu iBlack Search ihamba phambili ekutheni kukhokhelwe abantu abahlwempu imali yesibonelelo. Le nhlangano ithi lesi sibonelelo siyishintshe kakahulu impilo yabantu bakuleli. Isikhulu seBlack Search uNkk u-Abriham Faker, sithe abantu badinga ukuphila noma bengazi ukuthi bazophila kanjani.
“Abantu abanamali engenayo kepha kumele baphile, kodwa asazi bazophila kanjani, uHulumeni uyehluleka ukuhlinzeka abantu bawo njengoba kusho noMthethosisekelo wezwe othi uma abantu bengenayo imali engenayo uHulumeni unesibophezelo sokuhlinzeka ngemali labo abangakwazi ukuzihlinzeka bona. Kunabantu abaningi abafuna ukusebenza kepha ayikho imsebenzi,” kusho uNkk uFaker.
Kuguqulwe isinqumo sesifundazwe esithinta uMasipala
Umnotho wakuleli zwe awenzi kahle njengoba izazi zomnotho zithi izwe alinamali njengoba izinga labantu abangasebenzi lingaphezu kwama-30% noHulumeni ngakolunye uhlangothi uchitha izigidi zemali ukukhokha isikweletu esingaphezu kukasigidintathu omu-R3. Izinkinga zakuleli zibenzima kakhulu ngenxa yokhuvethe nemvalelwekhaya.
Ekhuluma kumsakazeli womphakathi usomnotho uBonang Mohale, uthe abantu abahluphekayo basazohlupheka kakhulu kulesi sikhathi esizayo. “Kunenqwaba yabantu ediliziwe emisebenzi, kuphinde kube abantu abadlule emhlabeni. Izibalo zabantu abalahlekelwe imisebenzi ziphindwe cishe kashumi kunalabo ababulawe igciwane. Kulahleke imisebenzi eyizigidi ezi-2.2 bese uphinda lezo zibalo kahlanu okungabantu abancike kumuntu oyedwa okunguye ohlinzekayo ekhaya. Abantu abaningi bazobulawa indlala.”
Kanti ngakolunye uhlangothi kulindeleke ukuthi nemali yokugibela amatekisi inyuswe kusuka lulunye kuNtulikazi.